Labo Kamid ah Gaangisteriinta Soomaalida ee Super Power oo Maanta Lagu Toogtay Xaafada Islii (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa maanta xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa ka dhacay arin yaab leh oo ah in dhalinyaro gaangis Soomaali iyo Oromo Isugu jirta lagu toogtay magaalada dhexdeeda.
Ciidamada Kenyaatiga ah ee la dagaalama bucadda oo loo yaqaan Flying Squad ee qaabka dharcadka ku hawlgala ayaa bartamaha xaafadda Islii, gaar ahaan wadada u dhaxeysa Suuqa 1-aad ee Islii, suuqyada Amal iyo Taysir ayaa waxa ay ku toogteen labadaasi ruux.
Labada ruux ee la toogtay ayaa mid ka mid ah uu ahaa Soomaali, halka midka kalena uu ahaa Oromo, waxaana lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen Kooxda loo yaqaano Super Power oo ah Gaangis burcad ah oo dadka dhaca.
Wararka ayaa sheegaya in kooxahan maalmihii la soo dhaafay ay dhibaatooyin ka wadeen xaafada Islii, iyagoo dhac u geysanayay Ganacsatada iyo dadka kale ee suuqaasi u soo adeega taga.
Mid ka mid ah dadka ku nool Xaafada Islii ayaa warbaahinta u sheegay in muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dharcadka ah ay baadigoob ku hayeen dhalinyarada Soomaalida ah ee dadka nafta u keenay.